Fanavakavahana - Wikipedia
Natao ho an'ny olona fotsy ihany ity torapasika ao Afrika Atsimo itySary nalaina tamin'ny 1989
Ny fanavakavahana dia rehefa samihafa amin'ny olona iray ny olona iray hafa. Atao hoe mpanavakavaka ny olona rehefa manavakavaka na manao zavatra ratsy ilay olona noho ny zavatra misy amin'ilay olona hafa ilay olona iray. Ny Fanambarana iraisam-pirenena ny Zon'Olombelona dia ilasa fa tokony harovana amin'ny fanavakavahana ary koa ny fampirisihana hanavakavaka ny olona rehetra.
Mety voaavakavaka ny olona iray noho ny foko niaviany, lahi-vaviny, heviny ara-politika, olona tiany iarahanas, maha-izy azy ara-dahivavy, finoany, ny fisehony, sary niharany, ny fomba fiainany, ny safidy akanjony, ny taonany na ny kilemany na dia mpikambana na ao amina vondrona ara-tsosialy, sokajy ara-tsosialy, sata ara-tsosialy na saranga, na noho ny antony hafa maro .
Manana endrika betsaka ny fanavakavahana Mety ny fandroahana amin'ny asa izany, tsy fanekena ny tena hanao ny asa, fanomezana karama vola kely noho ny an'ny hafa ho ana asa mitovy, tsy fanomezana trano na, famazivaziana, fanadaladalana, na fikarakarana amin'ny fomba samihafa. Natsofoka ny lalàna hoe Equal Opportunities, izay mampanatena ny tsirairay tsy handà hampiasa olona iray noho ny fokony, ny taonany, ny lahivaviny na ny finoana, ary tsy firaharahiana ny olona manana kilema na fahazoana. Olona roa manao andraikitra mitovy dia tsy maintsy omen-karama mitovy.
Tsy ara-dalana amin'ny firenen-kafa ny manavakafaka noho ny foko niaviana, ny lahivavy na ny finoana ananana, amin'ny asa na amin'ny trano. Na dia eny amin'ny firenena mandrara fanavakavahana za dia mbola misy foana izany noho ny antony tsy voafehin'ny lalàna. Amin'ny firenena hafa, azo atao ny manavakavaka ary mety ho lalàna napetraky ny governemanta ihany koa izany. Hita indrindra indrindra izany eny amin'ny firenena ahitana finoana ofisialy, ary voaavakavaka ny olona manana finoana hafa. Discrimination is also widespread in countries which have a culture in which castes or social classes are widely recognized.
Pejy hafa[hanova | hanova ny fango]
Fankahalana ireo olona tia olona mitovy lahivavy aminy
Spesiesisma : fiheverana ny olombelona ho ambony noho ny biby rehetra izay mitarika ho amin'ny fitrandrahana ny biby.
Fanambarana Iraisam-pirenena momban'ny Zon'Olombelona
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanavakavahana&oldid=773539"
Voaova farany tamin'ny 31 Oktobra 2015 amin'ny 07:06 ity pejy ity.